★မြန်မာ့အလင်း★: ဦးဏှောက်မရှိသူများ အာလာဆီမှာဆုတောင်းသည်
အာလာ ဆိုတာ မွတ်ဆင်တွေ ကန်တော့နေတဲ့ အရာကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ Quran ကျမ်းထဲမှာတော့ သူဟာလူသားတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာစိတ် အရမ်းကြီးတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုထားပါတယ်။ အာလာသာ တကယ် မေတ္တာစိတ်ကြီးနေရင် လူတွေကို ဘာကြောင့်မီးရှို့ပြီး ဒုက္ခပေးမှာလဲ။ သူ့ပြောစကားကို နားမထောင်မှ မီးရှို့မှာပါလို့ ဆင်ခြင်ပေးလို့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ သူ့ပြောစကားကို နားမထောင်အောင် ဘယ်သူက လုပ်တာလဲဆိုတာ Quran ကျမ်းကို ဖတ်ကြည့်ရင်သိပါတယ်။ အဲဒါအတွက် အထူးသီးသန့် “အာလာရူးသွားပြီလော”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အထူးဆောင်းပါးကို ရေးပေးပါ့မယ်။ (စိတ်ဝင်စားလား? )
တကယ်တော့ သူရဲ့ ပြောစကားတွေဟာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အပြင် ရယ်စရာပင်ကောင်းလှပါတယ်။ လူလူချင်းသတ်ဖို့အားပေးတာတွေ၊ ချေးပါရင် ကျောက်ခဲနဲ့ချေးကုံးရမယ် ဆိုတဲ့သင်ကြားချက်။ ကျောက်ခဲကလည်း စုံဂဏန်းမဖြစ်ရဘူး။ အိမ်သာ တံခါးလာခေါက်ရင်လည်း လူရှိတာ အသိမပေးရဘူးတဲ့။ အိမ်သာကထွက်ရင် ဘယ်ခြေတောက်နဲ့ အရင်လှမ်းရမယ်တဲ့ဗျာ။ ချေးယို သေးပေါက်ကအစ ရူးကြောင်ကြောင် စည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ထားပြီး သူ့စကားကို လိုက်နာရမယ်ဆိုပဲ။ ကုလားအုပ်ရဲ့ ကျင်ငယ်ရေကို သောက်ခိုင်းတာကလည်းပါသေးတယ်။ အဲဒီရူးကြောင်ကြောင် စည်းကမ်းချက်တွေကို မလိုက်နာရင် ငရဲပြည်မှာ မီးရှို့ပြီး ဒုက္ခပေးမယ်တဲ့။
နောက်ပြီးတော့ မိုဟာမက်ကတဆင့် ဟောကြားထားတဲ့ Quran ကျမ်းကလဲ မူကွဲ7ခုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်းကွဲတွေကလည်း မှိုလိုပေါက်နေတယ်။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းတွေ့ရင် ဘယ်ဂိုဏ်းလဲဆိုတာ အရင်မေးရတဲ့ အခြေအနေမှာပါ။ (shiite sunni ဂိုဏ်းနှစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါ) အဲလောက်တန်ခိုးကြီးနေတာ Quran ကျမ်းလေးကို မူကွဲမရှိအောင် ထိမ်းထားပါလား။ အခုတော့ မွတ်ဆလင်တွေခမျာ ဘယ် Quran ကို အမှန်ယူပြီး လိုက်နာရမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ မှားတဲ့ Quran ကို အမှန်လို့ထင်ပြီးလိုက်နာမိရင် ဒုက္ခရောက်ဦးမယ်။ သူကတော့ Quran လေးတောင် အဆင်ပြေအောင် မထိမ်းထားပဲ သူ့စည်းကမ်းကို မလိုက်နာရင် မီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ရပ်က တရားသလား? အဲဒါ မေတ္တာစိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား?
မွတ်ဆလင်တွေအယူဆမှာ အာလာက လူမှန်တွေကို သိအောင်လမ်းညွှန်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အာလာကနေ လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြပါစေဆိုတဲ့ ဆုတောင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုလို့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ ခုနကပြောသလို ပြောကြောင်ကြောင်သင်ကြားချက်တွေဟာ လမ်းမှန်ပါပဲ။ အာလာက လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြပေးပြီဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံလဲ သိဖို့ မိုဟာမက် တစ်ကောင်ကို နမူနာကြည့်ပါ။ အဲဒီကောင်လုပ်ကိုင်ပုံကြည့်ပါ။ ချွေးမနဲ့လဲ ဖေါက်ပြန်တယ်။ ၆ နှစ်သမီးလည်း တဏှာရူးတယ်။ အဒေါ်နဲ့လည်း ကာမစပ်ယှက်လိုက်တာပဲ။ မိန်းမ ၄ ယောက်အထိပဲ ယူပါဆိုတာ ယူလိုက်တာ အရေအတွက်တောင် အတိအကျမှတ်တမ်း မထားနိုင်တဲ့အထိပါပဲ။
ဒီတော့ မွတ်ဆလင်တွေအနေနဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ အာလာဆီမှာ လမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြမှုကိုရရှိသွားမယ်ဆိုရင် မိုဟာမက်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ မိုဟာမက်လို ဒီခေတ်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ခုံမှာ သေဒဏ်ပေးခံရမှာ သေခြာပါတယ်။ ဒီတော့ အလာဆီမှာ လမ်မှန်ညွှန်ဖို့ ဆုတောင်းသင့်လားဆိုတာ အကျိုးအမြတ်တွက်ပြီးမှသာ ဆုတောင်းသင့်ပါကြောင်း